လက်ကား KD-3DVC-6N စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း အရည်အသွေးမြင့် တီဗီစတူဒီယို အိတ်ဆောင် 3D Virtual All-In-One စက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူ |ကြင်နာသောကွန်ရက်
Alibaba တွင် KD-3DVC-6N ကိုမှာယူရန် နှိပ်ပါ။
ဗီဒီယိုထည့်သွင်းခြင်း။ SDI×4၊ HDMI×1၊NDI×6၊SRT×6၊ Stream×6
ဗီဒီယိုအထွက် SDI(ring out)×4၊HDMI×1၊NDI×1၊SRT×1
အခြားသော အင်တာဖေ့စ်များ USB2.0×2၊USB3.0×2၊RJ45×1
ပြောင်းပါ။ ကင်မရာ×4၊NDI×6၊SRT×6၊Stream×6၊DDR×2၊Virtual camera×8
Mixer ပါ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ရောနှော SDI×4၊Analog mixer(XLR\_RCA)×5၊Audio hardware နှောင့်နှေးသည့်ကိရိယာ
စာတန်းထိုး CG-Alpha DVE
ကင်မရာ PTZ Virtual PTZ၊ Camera PTZ
virtual ခြေရာခံပါ။ ခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူ virtual စတူဒီယို
ဖွဲ့စည်းမှု Intel i9CPU 9900T၊RAM 16G၊1TB M.2,4G GPU
KIND 3D virtual machine LIVEVR STAITON KD-3DVC-6N နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
1. ဗီဒီယိုထည့်သွင်းမှု- 3G-SDI IN×4၊ HDMI IN×1၊ NDI IN×6၊ SRT IN×6၊ Stream×6၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု 3840×2160 အထိ၊
2. ဗီဒီယိုအထွက်- PGM အထွက် HDMI ×1,NDI ×1,SRT×1;
3. အသံအဝင်နှင့်အထွက်- ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိုက်ခရိုဖုန်းထည့်သွင်းမှု XLR IN×5 (48v ဖန်တမ်ပါဝါပါရှိသော) နှင့် အသံချိန်ခွင်လျှာထည့်သွင်းမှု XLR IN×5၊ စတီရီယိုထည့်သွင်းမှု RCA (L, R) IN×5;SDI ဒစ်ဂျစ်တယ် ဒစ်ဂျစ်တယ် အသံထည့်သွင်းမှု4စုံ၊အသံလက်ကျန်အထွက် XLR OUT×2၊ စတီရီယိုအထွက် RCA(L၊ R) OUT×1;SDI ဒစ်ဂျစ်တယ်ထည့်သွင်းထားသော အသံထွက်ပေါက် 1 စုံ၊ HDMI ဒစ်ဂျစ်တယ်ထည့်သွင်းထားသော အသံထွက်အထွက် ၂ စုံ၊
4. Built-in ဒစ်ဂျစ်တယ် ရောသမမွှေစက် + အန်နာရောနှော ရောစပ်စက်၊ အော်ဒီယို မြှပ်နှံမှုနှင့် မြှုပ်နှံမှု ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် အော်ဒီယိုနှင့် အန်နာလော့ အော်ဒီယို ရောစပ်ခြင်းကို သဘောပေါက်သဖြင့် ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော အသံကို SDI အထွက်နှင့် HDMI အထွက်များအဖြစ် မြှုပ်နှံနိုင်ပြီး၊ ၎င်းတွင် စတီရီယို အထွက်အဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ အသံအတိုးအကျယ်ကို ချိန်ညှိရန် ဟာ့ဒ်ဝဲလ်အမှုန်အမွှား6စုံနှင့် အသံရွေးချယ်မှုအား ထိန်းချုပ်ရန် ဟာ့ဒ်ဝဲခလုတ်6စုံ၊ စတီရီယို × 1 အထွက်နှုန်း၊ ထုတ်လွှင့်မှု မော်နီတာ Ф3.5×1၊ ပြန်ဖွင့်သည့် မော်နီတာ Ф3.5×1၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် နားကြပ် Ф3 .5×1;
5. အသံနှင့် ဗီဒီယို၏ တိကျသော ထပ်တူပြုမှုကို ရရှိစေရန် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် ဟာ့ဒ်ဝဲကုဒ်ပြောင်းစက်မှတဆင့် တပ်ဆင်ထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲ အသံနှောင့်နှေးခြင်း၊
6. Built-in PTZ ကင်မရာ CCU ထိန်းချုပ်မှုယူနစ်၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ ဂျစ်စတစ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာနှင့် ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့် Hall zoom ထိန်းချုပ်ကိရိယာမှတဆင့်၊ ကင်မရာ ၈ လုံးကို တွန်းခြင်း၊ ဆွဲခြင်း၊ လှည့်ခြင်း၊ စောင်းခြင်း၊ စောင်းခြင်းတို့ကို အသီးသီး ထိန်းချုပ်ပါ။ကင်မရာရွေးချယ်မှုခလုတ် ၈ ဖွဲ့၊ ကြိုတင်သတ်မှတ်ဖြတ်လမ်းခလုတ် ၉ ဖွဲ့နှင့် ကင်မရာမီနူးဆက်တင်ဖြတ်လမ်းခလုတ်များ၊၊ ကင်မရာ၏အဖြူရောင်ချိန်ခွင်လျှာ၊ အလင်းဝင်ပေါက်၊ ဆုံမှတ်အရှည်၊ အရောင်နှင့် အခြားအရောင်အသွေးနှင့် အလင်းအမှောင်ချိန်ညှိမှုများ၊
7. Tally- တပ်ဆင်ထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲလမ်းညွှန်ခေါ်ဆိုမှုစနစ်နှင့် လမ်းညွှန်သတိပေးချက်စနစ် Tally၊ သင်သီးခြားစီခေါ်ဆိုနိုင်သည်၊ အုပ်စုလိုက်ခေါ်ဆိုမှုများ၊ သော့တစ်ချောင်းတည်းနှင့် သော့ပိတ်တစ်ခုစီ၊ ချန်နယ်တစ်ခုစီသည် သီးခြားခေါ်ဆိုမှုအင်တာဖေ့စ် Micro XLR -6၊ အမျိုးအစား အင်တာဖေ့စ် × 8 (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)၊ အင်တာဖေ့စ်တစ်ခုစီသည် လွတ်လပ်သော နှစ်လမ်းစကားပြော၊ တာလီနှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ပေးသည်။
8. စာတန်းထိုးများနှင့် အွန်လိုင်းထုပ်ပိုးမှု ဟာ့ဒ်ဝဲ ဖြတ်လမ်းခလုတ်များမှတစ်ဆင့် CG-Alpha ဟာ့ဒ်ဝဲ ဖြတ်လမ်းခလုတ်များ 8 စုံ၊ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် CG-Alpha စနစ်အား လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် တစ်ခုတည်းသောသော့ချက်လုပ်ဆောင်ချက်၊
9. အဖွဲ့တစ်ခုစီတွင် ဟာ့ဒ်ဝဲ အရင်းအမြစ်ရွေးချယ်ရေးကီး ၈ ခုပါသော အုပ်စု3ခုကို ပံ့ပိုးပေးကာ SDI၊ NDI၊ SRT၊ Stream နှင့် DDR နှင့် အခြားသော အချက်ပြရင်းမြစ်များကို လမ်းကြောင်း 16 ခုဖြင့် အလိုလိုသိကာ လျင်မြန်စွာ ရွေးချယ်ပါ။
10. အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုခလုတ်- တပ်ဆင်ပါရှိ 16-ချန်နယ်ပြောင်းကိရိယာ၊ 16×2 ခလုတ်ခလုတ်များနှင့် T-shaped damping ခလုတ်တွန်းတံ၊ 16-ချန်နယ် အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုခလုတ်ကိရိယာတွင် စက်အနေအထား၏ ချန်နယ် 8 လိုင်း၊ ပြင်ပအချက်ပြလှိုင်း6လိုင်းနှင့်2ဒေသဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များ၏ချန်နယ်များ (ဗီဒီယို၊ ရုပ်ပုံ၊ PPT၊ VGA၊ ဗီဒီယိုပြန်ဖွင့်ခြင်း)၊ CUT သော့နှင့် TAKE သော့တို့ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
11. စောင့်ကြည့်ရေး မျက်နှာပြင်- 17.3 လက်မ 1920×1080 မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊
12. Double rocker arms- PGM နှင့် PVW virtual lens အသီးသီး၏ push-pull panning ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး double rocker arm မှန်ဘီလူး၏ push-pull panning ကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည့် တပ်ဆင်ထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲထိန်းချုပ်ရေး joystick များ။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ မှန်ဘီလူးချိန်ညှိမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် rocker arm အတွက် တိကျသောထိန်းချုပ်ခလုတ်များရှိသည်။တိကျသောထိန်းချုပ်မှု;
13. စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ- i9 9900T သို့မဟုတ် ပိုမိုမြင့်မားသော CPU၊ 16G မမ်မိုရီ၊ 1TBM.2 ဟာ့ဒ်ဒစ်၊ 4G သို့မဟုတ် ပိုမိုမြင့်မားသော သီးခြားဂရပ်ဖစ်ကတ်၊ WIN10 64-ဘစ် လည်ပတ်မှုစနစ်၊ 64-ဘစ် ရယူမှု၊ ကုဒ်နံပါတ်၊ အသံသွင်းခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု၊ သော့ခတ်ခြင်း၊ 3D နှင့် အွန်လိုင်းထုပ်ပိုးမှုစနစ်။အခြားများ- 1000M RJ45×1၊ USB2.0×1၊ USB3.0×1၊
14. Virtual စတူဒီယိုလုပ်ဆောင်ချက်- virtual keying ကို ချန်နယ်လေးခုတွင် တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
15. 1920×1080 မြင့်မားသော ကင်မရာအချက်ပြမှုများ သို့မဟုတ် အခြားသော အဓိပ္ပါယ်မြင့်စက်ပစ္စည်းများ၏ အချက်ပြထည့်သွင်းမှုများကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။dual-channel စနစ်သည် တစ်ချိန်တည်းတွင် အထွက်စခရင်ပေါ်တွင် ပြသရန် ကင်မရာ4လုံးအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
16. အစစ်အမှန်ကင်မရာများကို ရွေ့လျားခြင်း သို့မဟုတ် လည်ပတ်ခြင်းမရှိဘဲ ခြေရာခံမဟုတ်သော virtual စတူဒီယိုနည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပရိုဂရမ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကင်မရာမှန်ဘီလူးတစ်ခုစီကို တွန်းခြင်း၊ ဆွဲခြင်း၊ လှုပ်ယမ်းခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါသည်။
17. 3D virtual စတူဒီယိုစနစ်အတွက် Built-in chroma သော့၊
18. မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် မီဒီယာပစ္စည်းဖိုင်များ၏ အသံအတိုးအကျယ်ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ချိန်ညှိနိုင်သည့် ပါ၀င်သော virtual mixer၊
19. ၎င်းတွင် သော့ခတ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုပါရှိပြီး မတူညီသောသော့ခတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ဘောင်ဆက်တင်များကို သီးခြားလွတ်လပ်စွာ သိမ်းဆည်းကာခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
20. 3D virtual စတူဒီယိုသည် ဇာတ်ကောင်များနှင့် မြင်ကွင်းများ၏ ရွေ့လျားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် 3D Joystick ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး အမျိုးမျိုးသော တွန်းခြင်း၊ ဆွဲခြင်းနှင့် ဝေ့ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်သည်။
21. စနစ်သည် အခြားကင်မရာများ၊ ဗီဒီယိုပလေယာများ သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာများမှ တိုက်ရိုက်အချက်ပြမှုများကို လက်ခံနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ virtual scene တွင် တီဗီနံရံတွင် ရှင်းလင်းစွာပြသနိုင်သည်။
22. အချိန်နှင့်တပြေးညီ virtual scene တွင် virtual ကြီးမားသောစခရင်ပစ္စည်းကို အစားထိုးခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
23. မျိုးစုံသော virtual shots များ၏ အစမ်းကြည့်ရှုမှုများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
24. ဒေသတွင်း အသံသွင်းယူနစ်တစ်ခုအား မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အတွင်းဖရမ်ချုံ့မှု MEPG2 ဗီဒီယိုနှင့် အသံဖိုင်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည့် အသံဖမ်းယူနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးကာ အသံဖမ်းယူနစ်သည် 1920×1080၊ 3840×2160 ရှိပြီး ရယူမှုဘောင်နှုန်းမှာ 25fps ဖြစ်သည်။
25. နောက်ခံအဖြစ် ဗီဒီယို သို့မဟုတ် ရုပ်ပုံပါရှိသော 2D သော့ခတ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပံ့ပိုးပါ။
26. 3-channel virtual စတူဒီယိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများရရှိရန် ကင်မရာတစ်လုံးကို ပံ့ပိုးပါ၊ ဥပမာအားဖြင့် host နှစ်ခု၊ hard switch (သို့) host တစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုကို pan သို့ hard switch (သို့မဟုတ် pan) panoramic mode ( host နှစ်ခုကို ရိုက်ကူးခြင်း တစ်ချိန်တည်းမှာပင်) စနစ်သည် ကင်မရာတစ်လုံးတည်းဖြင့် မှန်ဘီလူးပြောင်းခြင်း၏မုဒ်များစွာကို ပံ့ပိုးနိုင်ပြီး၊ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ မှန်ဘီလူးပြောင်းခြင်းကို သိရှိနိုင်ပြီး လျှောနှင့်ဝေ့ခြင်း၏ အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြင့် ခလုတ်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ကနဦးစက်ပစ္စည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို လျှော့ချပါ။
27. လုပ်ဆောင်ချက် အင်တာဖေ့စ်သည် တာလီနှင့် နာရီမျက်နှာပြင်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
28. Dual virtual studio၊ ခလုတ်ရွေးချယ်မှုမှတစ်ဆင့် တူညီသော input မှန်ဘီလူးများ သို့မဟုတ် မတူညီသော input မှန်ဘီလူးများ၏ ဇာတ်ကောင်များကို မတူညီသောမြင်ကွင်းများ၏ virtual စတူဒီယိုတွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြောင်းနိုင်သည်၊ နှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည် နေရာနှစ်ခုကြားတွင် လက်တွေ့ကျကျ သိနိုင်သည်။
29. ခြေရာခံခြင်းပါရှိသော Virtual စတူဒီယို၊ ပေါင်းစပ်ကင်မရာနှင့် ထိန်းချုပ်ကင်မရာပါရှိသော၊ ခြေရာခံခြင်းနှင့်အတူ စစ်မှန်သော သုံးဖက်မြင် စတူဒီယိုကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း၊
30. Built-in CG-Alaph စာတန်းထိုးများနှင့် အွန်လိုင်းထုပ်ပိုးမှုစနစ်၊ Alaph တက်ကြွသောစာတန်းထိုးများ၊ ထောင့်အမှတ်အသားများနှင့် ဘူတာရုံအမှတ်အသားများ စသည်တို့၊ 3D အရာဝတ္ထုများနှင့် အလင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ရွေ့လျားနိုင်သောပစ္စည်းများ၊ DVE တိုက်ရိုက်ဗီဒီယို၊ ဗီဒီယိုပစ္စည်းများနှင့် အခြား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအောင်မြင်ရန် နည်းလမ်းများ ပြပွဲ၏ ဘက်စုံအမြင်အာရုံထုပ်ပိုးမှု၊
31. 3D ပုံသဏ္ဍာန် မြင်ကွင်းရုပ်ပုံပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
32. 3D ပရော်ဖက်ရှင်နယ် virtual မြင်ကွင်းများ အစုံ ၅၀ ထက်မနည်း ပေးပါ။
33. လည်ပတ်မှုမျက်နှာပြင်သည် PVW (အကြိုစောင့်ကြည့်ခြင်း) နှင့် PGM (ပရိုဂရမ်) တို့ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းပြသမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
34. Built-in streaming မီဒီယာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု၊ ပလပ်အင်များကို ထည့်သွင်းခြင်းမရှိဘဲ ပုံမှန်အတိုင်း ကစားနိုင်သည်။
35. အလေးချိန်- 5kg ခန့်၊ အရွယ်အစား- အလျား 425mm၊ အကျယ် 340mm၊ အမြင့် 120mm;
လွှင့်မီဒီယာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း- ကွန်ရက်ဗီဒီယို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုစနစ် (အိမ်ရှင်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်)
1) Web-based တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု၊ ကွန်ရက်အသုံးပြုသူများသည် ဘရောက်ဆာမှတဆင့် ၎င်းကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်သည်၊
2) တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွင်း ကွန်ရက်ချို့ယွင်းမှုကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် စနစ်၏ အလိုအလျောက် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
3) unicast နှင့် multicast ကိုပံ့ပိုးပါ၊ multicast ကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေပါ၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်စဉ်အတွင်း bandwidth ကိုချွေတာပါ။
4) စနစ်သည် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေချိန်တွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဆက်ရှင်အရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ချက်မရှိသလို လိုအပ်သည့်အခါတွင် အသုံးပြုသူအရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။၎င်းကို ကွန်ရက်အပိုင်းများနှင့် လမ်းကြောင်းများမှတဆင့် လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။၎င်းသည် broadband နှင့် narrowband ကဲ့သို့သော မတူညီသော bandwidth များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီး local area networks၊ metropolitan area networks နှင့် wide area networks များ၏ applications များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
6) အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဘူတာလိုဂို၊ စာတန်းထိုးများ၊ စာတန်းထိုးများနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ စာတန်းထိုးများနှင့် ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသော စာတန်းထိုးများကို ပံ့ပိုးပေးကာ၊ ဒေသန္တရကွန်ရက်အတွင်းရှိ အခြားကွန်ပြူတာရှိ စာတန်းများကို တည်းဖြတ်ရန် ပံ့ပိုးပေးပြီးနောက် တိုက်ရိုက်စာတန်းထိုးများကို ပေးပို့ပါ။ အသံလွှင့်အိမ်ရှင်;
7) စနစ်သည် streaming media recording နှင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး၊ နောက်ပိုင်းတည်းဖြတ်မှုနှင့် အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းသိုလှောင်မှုအတွက် အဆင်ပြေသည့် ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့်မြင့်သော ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့်မြင့်သော ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို MPEG2-HL၊
8) စနစ်သည် စံလွှင့်မီဒီယာဖြန့်ချိရေးစနစ်နှင့် FMS အတွက် rtmp ဖြန့်ချိရေးစနစ်တစ်ခု ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ယခင်- အကောင်းဆုံး အိတ်ဆောင် အသံလွှင့် လမ်းညွှန် အသံဖမ်းစက် တင်ပို့သူများ – KD-3DVC-6N စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက် ရောင်းချသည့် အရည်အသွေးမြင့် တီဗီ စတူဒီယို အိတ်ဆောင် 3D Virtual All-In-One စက် – အမျိုးအစား ကွန်ရက်
နောက်တစ်ခု: KD-BC-4H အရောင်းရဆုံး တိုက်ရိုက်အသံသွင်းခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် တွန်းလွှင့်ခြင်း အားလုံးကို တစ်ခုတည်းသော Virtual Studio အစိမ်းရောင် စခရင်သော့စနစ်